★မြန်မာ့အလင်း★: 9/11 ဓါတ်ပုံအသစ်တွေနဲ့ ကြက်တူရွေးတွေကို ဟာသလုပ်ကြစို့
9/11 ဓါတ်ပုံအသစ်တွေနဲ့ ကြက်တူရွေးတွေကို ဟာသလုပ်ကြစို့
နအဖမီဒီယာနဲ့ ဒီမိုမီဒီယာတွေကတော့ 9/11 ကိစ္စကို ဘင်လာဒင်လုပ်တယ်လို့ ပြောဆိုဆဲပါ။ တရုတ်မီဒီယာကလဲ ဘင်လာဒင်လို့ပြောပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါလူမျိုးတွေကတော့ အမေရိကန်အစိုးရကိုယ်တိုင် လုပ်တယ်လို့ လက်ခံထားကြတယ်။ ယခုအချိန်အထိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ဒီမိုဝါဒအပေါ်မှာ ဝေဖန်စမ်းစစ်ဖို့ မလုပ်ရဲပါဘူး။ သူတို့လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုတာက. . . မြန်မာအချင်းချင်း အတင်းပြောတယ်။ တစ်ဖက်ကို တစ်ဖက်အပုတ်ချတယ်။ မိမိဘက်ကို ဂုဏ်တင်တယ်.. ဒါတွေပဲထပ်နေတယ်။ တကယ်တမ်း ဆွေးနွေးဖို့ကောင်းတဲ့ 9/11 ကိစ္စ၊ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုကို မီးခိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ လိမ်နေရတဲ့အကြောင်း၊ အခွန်တွေဖိကောက်နေတဲ့ အစိုးရတွေအကြောင်း၊ NWO စတာတွေရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းရေးဆိုလည်း ပြည်တွင်းစစ်၊ ၀တပ်ဖွဲ့တွေကိစ္စ၊ တိုင်းရင်းသားအရေး ကိစ္စတွေဟာ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းတွေပါ။ မြန်မာအချင်းချင်း လမ်းမှာတွေ့ရင်တောင် နှုတ်မဆက်ချင်တဲ့အထိ စည်းလုံးမှုပြိုကွဲနေတာလဲ အဖြေရှာဖို့လိုပါတယ်။ ပြည်ပကိစ္စလဲမဆွေးနွေးရဲသလို . . . ပြည်တွင်းရေးလည်း မဆွေးနွေးဘူး။ အရေမရအဖတ်မရ ကလေးလိုရန်ဖြစ်တာကိုပဲ နိုင်ငံရေးလို့ အမည်တပ်နေတယ်ဗျာ။ တကယ်ကို ရယ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူတွေပဲ။ နိုင်ငံရေး စာရေးဆရာတွေကလဲ စာဖတ်ကောင်းအောင် ရေးတဲ့အဆင့်ပါ။ ဘာမှတွေးအခေါ်ထားတာ မရှိပါဘူး။ မြန်မာ့ပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်သမျှ မကောင်းတာ မှန်သမျှ မြန်မာတွေမှာပဲ အပြစ်ရှိတယ်လို့ အမြင်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ စာရေးနေသူတွေကို နိုင်ငံရေးစာရေးဆရာကြီးတွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒါကလဲအကြောင်းတော့ရှိပါတယ်။ နအဖမီဒီယာနဲ့ ဒီမိုမီဒီယာတွေက နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်တွေကို ငှက်ပျောသီး အခွံနွှာပြီး ကျွေးတာကို ဇိမ်ခံပြီးစားနေလို့ပါ။ ဦးဏှောက်သုံးပြီး စဉ်းစားတယ်.. ဝေဖန်တွေးခေါ်တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို (နအဖ၊ ဒီမို၊ တတိယလူ) မီဒီယာတွေက ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာ သင်ပေးထားတယ်။ အဲလို သင်ပေးတာကို ကြက်တူရွေးတွေလို ပြန်ပြောတာကို နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတယ်ဆိုပြီး စကားလုံးကြီးကြီးသုံးထားတာပါ။ သူတို့မှာ အထင်ကြီးစရာ တကွက်မှမရှိပါ။ ကျုပ်တို့ပြောတာ မယုံရင်… နအဖလူတွေပြောတဲ့စကားကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ နအဖမီဒီယာ နဲ့ တထပ်တည်းပဲ။ ထို့အတူဒီမိုသမားတွေကလည်း ဒီမိုမီဒီယာတွေနဲ့ တပုံစံတည်းပါ။
အခုဆိုရင် 9/11 နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဓါတ်ပုံအသစ်တွေထွက်လာပါပြီ။ အမေရိကန်လက်ချက်ဆိုတာ ပိုပြီးပေါ်လွင်လာပါတယ်။ ကော်မန့်လဲဖတ်ကြည့်ပါဦး။ အထက်က ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးရင် နိုင်ငံရေးသမား အမည်ခံထားပြီး ကြက်တူရွေးကြီးများဖြစ်တဲ့ နအဖ၊ ဒီမို၊ တတိယလူတွေကို ဟားတိုက်ကြပါစို့။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 10:47 AM